Ndeipi mikana yakakwana yokuwedzera backlinks?
Chivakwa chekubatanidza chikamu chinokosha chemushandirapamwe wekugadzirisa sekunze kwekubatanidza kuunza migwagwa uye mari kune webhusaiti uye kuwedzera simba rayo mumaziso evanotsvaga. Backlinks inoshanda sevhoti yebhizimisi rebhizimusi, uye kana ikabva kune mabhuku ehutano ehutano, ivo vanowanzova vane simba uye vanopa nzvimbo yako zvakakosha. Backlinks inogona kuwedzera simba rako rose peji uye kuvimbika kuitira kuti iwe unogona kuonekwa pa TOP ye SERP nokuda kwemashoko ekutsvaga - self help debt negotiation.
Zvisinei, munyika chaiye, haisi yese reklinkisi yakasikwa zvakafanana. Ndicho chikonzero vazhinji vanoita webhusaiti vanoshamisika kuti vandowedzera sei nhamba yehutachiona hwehutano kumawebsite avo. Zvinyorwa zvakare zvakabva kune zvivako zvepamusoro zvinozivikanwa uye zvakapoteredzwa nehutsva hunotsvakurudza-zvakagadziridzwa zvinowanzoita kuti uwane nzira yakasimba inokura pamwe nebhizimisi rako. Paunenge uchikudziridza mushandirapamwe wekuvaka chikwata chako, unofanirwa kuziva nezvenzira dzaunoda kuti udzivise kuchengetedza zvikwereti zveGoogle uye nzvimbo yako yekutsvaga kutsika.
Usati utanga kutsvaka mukana wekuvaka zvikwereti zvemashure panzvimbo yako, unoda kuenda kuneGoogle Webmaster Guidelines inotsanangura kwauri iwe zvakakosha zvakadini kumashure uye izvo zvinobatanidza kuvaka miitiro yausingadi kuisanganisira mukugadzirira kwako kushanda. Google ine simba rinokurudzira kubvisa spammy uye yakaderera-kunze kunze kwehukama. Kuchengetedza avo vasingateereri mazano aya, Google yakagadziridza mukurumbira wePenguin yakaderedza nzvimbo dzakaderedza nzvimbo dzakabatanidzwa mumabasa ekuvakira mazano ekunyengera.
Mazano ekugadzira mazano ekutsvaga Google anotsanangura zvakajeka kuti arege:
kusimba kwezvinyorwa zvepakutanga kana zviduku zvishoma;
masangano akavanzwa mukati mekunyorwa, zvakadai sekunyorwa mumusita weusita 0;
kuvhara kana kunyengedza zvinjini nevashandisi.
Ndinokurudzira zvakasimba kuti ugare kure nemigwagwa iyi uye usabatsirana nemavhidhiyo emhepo inovaita kuti usabatanidzwa kunyoresa se spam.
Disavow re-backlinks yakaderera
Kuti uwedzere hutano hwepfumi yako ye backlinks, haugoni kuderedza simba reGoogle Disavow chigadzirwa. Disavowing quality backlinks inokubvumira kuti usabatanidzwa nepepanamende yechitatu yepamiti. Urombo husina kusimba backlinks hunoti pawebsite yako inogona kuonekwa pasi pemamiriro akasiyana. Dzimwe nguva spammy backlink inogona kubuda nekuda kwekukwikwidzana kwako kwekuita panzvimbo yako. Uyezve, zvinowanzoitika kana mabheji ekare asingachawanikwi nekuda kwewebsite rebranding. Google inotsanangura nzira yekuisa dlvl backlinks, saka haibatsiri mazita ako. Kana uchangobva kuziva kuti backlinks inofanira kunge yakarongedzwa, unoda kugadzira faira neinowanikwa mazita uye kuiisa kuGoogle Webmaster Tool.
Zvino, iwe unoziva kuti shure zvakadini zvaunoda kudzivisa uye kuti ungazviita sei nekubatsirwa kweGoogle, kuitira kuti iwe unogona kudzidza nzira dzakarurama dzekuvandudza nzvimbo yako yepaiti uye nekugadzirisa zvakanyanya backlinks kune dzimwe nzvimbo dzekunze.
Nzira yekuwedzera sei nhamba yehutano hwemashure?
Usarega kuisa pfungwa itsva kune zvakagadzikana sezvo pane nguva dzose mikana yakanaka inogona kukubatsira kuti uite mujenya wehutano hwemashure. Iwe unofanirwa kuwana zvigadziro zvehutano pawebsite yako uye nguva dzose uzive nezvemutsva. Pane dzimwe nzira dzekutsvakurudza matanho mune zvesayiti yepaiti inogona kunge yakazara sezvainoita shanduro yese yekutsvakurudza uko iwe uchishandisa zvishandiso zvekutsvaga injini yekunyora mazita ako ese URL kana kutarisa mumagariro ehupenyu kuitira kuchengeta zvausina kutaura pamusoro.
Kuti uwane mikana itsva yehuwandu, unogona kushandisa dzakasiyana-siyana dzekodzero yekutsvakurudza mabhuku. Ndinokurudzira kushandisa Moz Pro uye Semalt Auto SEO . Uchishandisa mathizha aya, unogona kuenzanisa rankings yemapeji chaiwo ane tarisiro yezvinyorwa mazwi uye mwedzi wekutsvaga kwevhesi yemashoko aya ekutsvaga.
Pakarepo paunowana magwaro emazwi ako emetrics, unogona kutanga kutsvaga mazwi akafanana. New key keywords ichakupa mukana wekugadzira zvinyorwa zvitsva zvewebsite yako. Iva nechokwadi chokuti mazwi awakasarudza aya anonyanya kukosha kumisika yako yemusika uye ane yakakwirira yekutsvaga (inenge 1 000 pamwedzi). Zvisinei, aya mazwi ekutsvaga haafaniri kunge ari kukwikwidza zvakanyanya sezvausingazokwanisi kuashandisa iwo kuti ubatsirwe.
Tsvaga mawebhusayithi ane kodzero dzepamusoro
Kuwedzera simba rako rekudzokera shure. Aya masayiti haafaniri kunge ari makwikwi chaiwo kune bhizinesi rako rekutsvaga, asi zvishoma nezvishoma zvakabatana nemhizha rako. Izvi zvinogona kukubatsira kuti ukokwe vangave vatengi, simudza PageRank uye uvandudze mararamiro ako. Iwe unogona kutarisa kuti webhusaiti yakakurumbira, chikwata, chiyero chevashanyi uye mamwe maitiro ekushandisa Semalt Website Analyzer . Iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya pamatricriki makuru anoratidza kana mawebsite angave anobatsira pakuwedzera backlinks uye rankings peji kana kwete.
Unofanirwa kubhadhara zvakanyanya pazvinhu zvakadai sewebsite:
muzana yevashanyi vanouya kunewebsite kubva kune dzimwe nzvimbo;
kushanda kwemasvomho ekutanga - kubhadhara muzinga, mutengi wenguva anoshandisa nzvimbo, zuva rekuona peji, nevamwe);
A pfumbamwe yehupenyu yekutsvaga motokari uye kutumira magwagwa;
top keywords kubva kunjini.
Aya magetsi achaderedza kutsvaga kwako, achikupa runyoro rwemawebsite akakodzera zvakakosha zvakakosha zvikuru mukugadzira uye kuchengeta backlinks kwewebsite yako.
Sarudza zvinyorwa zvinyorwa
Zvino, kana wawana runyoro rwemhando yakakodzera yebusika, ndiyo nguva yekuwana kudzokera shure kubva kwavari kuburikidza nekupa kufadza uye kutsvakurudza-zvakagadzirwa. Chinangwa chekutanga chekuti zvinyorwa zvako zvioneke pane mamwe mazita anozivikanwa nezvehuwandu hwemashoko ndezvekuvandudza mararamiro ako uye kuratidzira kune vatsva vateereri.
Kana ukasarudza kutumira zvaunenge uchida kuti zvivakidzani zvivakwe kune dzimwe nzvimbo dzekushandira, ita nechokwadi kuti inoenderana nemutevedzeri wekutumira mitemo uye inokodzera vateereri vako. Iwe unogona kuisa mamwe mawebsite maonero ehupenyu kana kutumira vamwe vamiriri vetsamba.
Saka, kana iwe ukashambadza zvakagadzirwa zvakagadzirwa-tsvakurudzo nehutano hwakakodzera hwechikwata chako, iwe uchawedzera ruzivo kuenda kunzvimbo yako uye kukura mukurumbira wako semutungamiri wemafungiro pakati pevatengi vako vanogona, vanogona kutendeuka kubhadhara kwako kunotungamirira.